လွပ​ေသာ ကမာ — Steemkr
goldbloger-335 in artzone
ပလက်ဖောင်းအားဖြင့်ကမ္ဘာ့အများဆုံးသာယာလှပလေဆိပ်ချဉ်းကပ်မှုသရဖူဆောင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ "Donegal အလွန့်အလွန်လှပခြင်းနှင့်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဒီနှစ်ထိပ်အစက်အပြောက်ထိုင်," အာဒံ Twidell, PrivateFly ၏ CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ "၎င်း၏ကြမ်းတမ်းကမ်းရိုးတန်းရှုခင်းများမကြာသေးမီက Star Wars ရုပ်ရှင်များအတွက်တည်နေရာတစ်ခု ရှိ. , ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုရန်ခဲယဉ်းပါဘူး။ " ထိပ်တဆယ်ကိုလည်းစကော့တလန်ရဲ့မယုံနိုင်စရာအပြင် Hebrides အတွက် Barra
Donegal, အိုင်ယာလန်၏ကျောက်တောင်ကမ်းခြေထဲမှာတစ်ဦးသရုပ်ဆောင်အခန်းကဏ္ဍ "Star Wars: အဆိုပါအင်အားစုငါ့ကိုနှိုး" ဟုအဆိုပါထောင်စုနှစ်စွန်ငှက်ထက်အခြားအဘယ်သူမျှခရိုင်ရဲ့ကျောက် Malin ဌာနမှူးအပေါ်ဆိုက်ရောက်လာသောအခါ - အိုင်ယာလန်ရဲ့အများဆုံးမြောက်ဘက်အချက်။ သင်တို့မူကားတစ်ဦးစိတ်ကူးယဉ် starship တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘိုးအင်း 747 လေယာဉ်ဆင်းသက်နေဖြစ်စေ, Donegal လေဆိပ်တစ်ခုအံ့မခန်းဆင်းသက်ချွတ်ဖြစ်ပါသည် - ယခုက PrivateFly, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Chartered များအတွက်ဘွတ်ကင်
၏ကျွန်းပေါ် Barra လေဆိပ်များ၏သဲအလှတရားတို့ပါဝင်သည်။ ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ အမှန်တကယ်မတည်ရှိကြောင်း '' Star Wars '' တည်နေရာ "ဒီထိပ်တန်းတစ်ဆယ်ခရီးသွားပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့နှစ်စဉ်ရေပုံးစာရင်း, သင့်တစ်သက်တာအတွက်ပျံသန်းဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနွယ်ဖွားတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရောနှောဖြစ်ပါတယ်။ စကော့တလန်ရဲ့အပြင် Hebrides အတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဆုရှင်ဆာ (ကမ္ဘာ့အတိုဆုံးစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ပြေးလမ်း) နှင့် Barra နဲ့တူသေးငယ်တဲ့ပြေးလမ်းကနေအဓိကရန် လန်ဒန်စီးတီးသို့မဟုတ် Miami International ကတက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ပေုံ, "တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရလေယာဉ်မှူးသည်
ကိုယ်တော်တိုင်သူသည် Twidell ဆိုပါတယ်။ ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လေကြောင်းပရိတ်သတ်တွေတစ်ဦးက panel ကိုကမ္ဘာအနှံ့ 112 လေဆိပ်စုစုပေါင်းထက်ပို 8,500 မဲရရှိခဲ့သည့်နှစ်ပတ်လည်စစ်တမ်းအတွက်ပါဝင်ခဲ့။ အခြားအပျေါလှငျလန်ဒန်စီးတီးလေဆိပ်နှင့် Nice Cote d'Azur ၏နေရောင်-အရောင်ချွတ်ထားတဲ့, မြေထဲပင်လယ်အလှတရားသို့ဆငျးသဖွငျ့ရရှိပုံ-စုံလင်သောနပေုံပါဝင်သည်။ သင်သည်ထိုစုံလင်သောပြတင်းပေါက်ထိုင်ခုံ
Instagram ကိုဖမ်းယူချင်လျှင်, ဤသငျသညျ 2018 ခုနှစ်ထွက်စစ်ဆေးနေရပါမည်သည့်နေရာများဖြစ်ကြသည်။ PrivateFly အဆိုအရ 10 အရှိဆုံးသာယာလှပလေဆိပ်ဆင်းသက်, 1. Donegal လေဆိပ်, အိုင်ယာလန် 2. Barra လေဆိပ်, စကော့တလန် 3. Nice Cote d'Azur, ပြင်သစ် 4. Queenstown လေဆိပ်, နယူးဇီလန် 5. Juancho အီး Yrausquin လေဆိပ်, ဆာ, ဒတျချြကာရစ်ဘီယံ 6. Orlando တွင်မဲလ်ဘုန်းလေဆိပ်, အမေရိကန် 7. Billy ဆရာတော်တိုရွန်တိုမြို့လေဆိပ်, ကနေဒါ 8. လန်ဒန်စီးတီးလေဆိပ်,
လန်ဒန်, ဗြိတိန် 9. မင်းသမီးဂျူလီယာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်, Philipsburg, စိန့်မာတင်, ပြင်သစ် / ဒတျချြကာရစ်ဘီယံ 10. မိုင်ယာမီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်, မိုင်ယာမီဖလော်ရီဒါ, အမေရိကန် ဆက်ဖတ်ရန် ကမ္ဘာ့၏တစ်နှစ်ကြာ အကောင်းဆုံး Beach EV တစ်စုံလင်သောကမ်းခြေရှိတယ်